Oge opupu ihe ubi na UMAM | Rayson
Ọ na-agbasi mbọ ike mgbe niile, Rayson etolitela ịbụ onye na-achụ n'ụlọ ahịa na ndị ahịa. Anyị na-elekwasị anya n'ịdị ike nke sayensị na azụmaahịa ọrụ. Anyị edobela ngalaba ọrụ ndị ahịa ka ọ ka mma nye ndị ahịa na ọrụ ngwa ngwa gụnyere ọkwa nsuso. Oge opupu ihe ubi na ụdọ akwa anyị kwere nkwa na anyị na-enye ndị ahịa ọ bụla nwere ngwaahịa dị elu gụnyere nke oge opupu ihe ubi na ụzụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịmata nkọwa ndị ọzọ, obi dị anyị ụtọ ịgwa gị.Rayson agafeela ule dị iche iche. Ha bụ ule na-esiri ike na ule na-eguzogide na-eguzogide eriri, ule njikwa mmiri, agbatị & mgbake, wdg.